ओमान प्रवेशको लागि सेप्टेम्बरदेखि नयाँ नियम लागू, भिसा नवीकरण गर्न खोप अनिवार्य | सुदुरपश्चिम खबर
सुदूरपश्चिम खबर प्रकाशित : भदौ ११, २०७८ 16
ओमानमा सेप्टेम्बरदेखि भिसा नवीकरण गर्नको लागि कोरोना विरुद्धको खोपको एक मात्रा लगाएको हुनुपर्नेछ । यस्तै अक्टोबरदेखि भिसा नवीकरणको लागि खोपको दुवै मात्रा लगाएको हुनुपर्ने ओमानमा रहेको नेपाली दूतावासले जनाएको छ ।
दूतावासका अनुसार ओमानमा कोरोना भाइरसको अनुगमन गरिरहेको सर्वोच्च कमिटीको बैठकले भिसा, खोप लगायतका विषयमा नयाँ निर्णय गरेको हो ।
यस्तै २०२१ को जनवरी देखि जारी गरिएका भिसाको म्याद पनि डिसेम्बरसम्मको लागि निःशुल्क थप्न सकिने छ । ओमानमा रहेको नेपाली दूतावासका अनुसार नेपालमा रहेकाहरुले आरओपीको वेबसाइटबाट नवीकरण गर्न सक्नेछन् । ओमान बाहिर बसेको ६ महिना भन्दा बढी अवधि भएको छ भने रोजगारदातामार्फत आरओपी कार्यालयमा सम्पर्क गर्नुपर्ने दूतावासको सूचनामा उल्लेख छ ।
यस्तै सेप्टेम्बरदेखि ओमान प्रवेश गर्ने यात्रुहरुले त्यहाँको सरकारले मान्यता दिएका खोपको पूर्ण मात्रा जोनसन एण्ड जोनसन बाहेक लगाएको हुनुपर्नेछ । अन्तिम खोप यात्रा गर्नुभन्दा कम्तीमा १४ दिन अगाडि लगाएको हुनुपर्ने छ । ओमानले फाइजर÷बायोनटेक, अक्स्फोर्ड÷अस्ट्राजेनेका, गमालेया स्पुतनिक भी, मोडेर्ना, कोभिसिल्ड(भारतमा बनेको), सिनोभ्याक(कोरोनाभ्याक), सिनोफार्म(भेरोसेल) र जोनसन एण्ड जोनसन गरि आठ कम्पनीका खोपलाई मान्यता दिएको छ ।
यस्तै यात्रा गर्नुपूर्व सबै यात्रुले ट्यारासुद प्लस मोबाइल एप डाउनलोड गरि आफ्नो अन्य विवरण लगायत क्यूआर कोडसहितको खोप लगाएके प्रमाण तथा पीसीआर प्रमाण पत्र समेत अपलोड गर्नुपर्ने दूतावासले जनाएको छ ।
यस्तै उडान पूर्व ७२ घण्टाभित्रको पीसीआर परीक्षण रिपोर्ट हुनुपर्ने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको छ भने पीसीआर नेगेटिभ भएकाहरुले क्वरेण्टीन बस्नुपर्ने छैन । कम्पनीको क्वरेण्टीन सम्बन्धी व्यवस्था नभएकाहरुले एक महिनाको मान्यता भएको अन्तर्राष्ट्रिय कोरोना यात्रा बिमा गरेको हुनपर्नेछ । ओमानमा रहेका नेपालीलाई यी विषयमा केही बुझ्नुपरेमा दूतावासको सम्पर्क नम्बर २४६९६१७७ र २४६९६८८३ र हटलाइन नम्बर ७१५९२४९० मा फोन गरेर बुझ्न सकिने दूतावासले जनाएको छ । उज्यालो अनलाइन बाट सभार
रुसमा कोरोनाको भयाव‍ह संक्रमण : एकै दिनमा १००० जनाको मृत्यु !!
बन्दुकधारीले अन्धाधुन्ध गोली प्रहार गर्दा ६ जनाको मृत्यु !!